गिरिन्टी : ह्याँती गर्ने कुरा - AahaSanchar
Home आहा बिचार गिरिन्टी : ह्याँती गर्ने कुरा
कुनै ट्याम्मा आफ्नै अक्कल र डिम्याक ख्याइकिन पच्छारीया पनि जइसी र पूज्जारापूज्जारी बनेइका थ्या हेन्नोई । फिरी तिनेरू क्या अल्तै जाक्ता हँुदान र ? हजुर्रा भित्¥याभाइ¥या देवीदेउता, थानीपानी, मैमस्सान, भूतप्रेत, बोक्साबाक्सी, स्याक्रुव्याक्रु जम्मैलाई तोप्ल्ने हेन्नोई । अइचेल हो र क्या भाउन्ने भो ? अग्गारीयाले सिमेत फिल खानेस्तो लक्षिण देखाउचन भन्चौं । यो क्या साक्का भाम हो ? “छेर्नेलाई भन्दा हेर्नेलाई लाज” भन्दाइनी गर्ने भन्दा गराउनेलाई लाज्जौंमर्नु भन्नु हुन्च र । उइछारी बेल्ली आज्नु धेरै सुविस्ता आइयो छ हेन्नोई । अब ता अचाक्ली सजिल्ला जुकले मिच्चि ल्याल्यो छ भन्नु हुन्च र । पइलास्तो घोट्टिघोट्टिकिन गाँठ्ठामुठ्ठान्वा मोच्याङ्रा फाल्नै नपर्ने । किताबौं अँन्न्वारै नच्याले पैलो गिरिटौं गिरिन्टी पक्का हेन्नोई । उइल फुर्नु हो र परिपर्रिकिन हजुर्रा आँख्खै प्याँल्या पनि क्या ला र ? भन्यास्तो पाला प¥या भन्नु हुन्च र ?
अइल ता फिल हुने कुर्रै नाई । पास्सौं आस मात्रै होला र ? सक्केसम्मन अघेटौं पैँलो नभयापन्तै पछार्रीमाँटौं गिरिन्टी पक्का भन्नु हुन्च । हजुर्रा जुकहरू पनि कस्ता नाम्रा आक्का हुन हेन्नोई ? पइलै छोराछोरी जर्माइकिन पच्छि खुर्सत्ता बेलाँन्नु व्यास्या¥या पन्तै च्याट्टै स्वाइजाने । धुरी मोर्रिकिन ट्याम लाक्दारी सिला लापन्तै स्वाल्ने । उइछारी हाक्कोधोक्को काँई पनि नहुँने भन्चौं । आँप्पूmले चास्तो दिल्ले खास्तो गिरिट ल्याइदिने हुमदेखि रुमसम्मा र टिउसिङदेखि कच्चिङ्ङालयहरू मस्तै औँ¥याइका छन् हेन्नोई । परीक्षा हल्नु बस्नाउ अघिल्लो साल्नु पर्या स्याँग्गु, ल्ह्प्का, पुल र बिर्रिज कोर्सन्वाले बिन्ना पैसई निशुल्क पर्रेल्चन् गरै । ह्याँ गर्ने भन्दा गराउने जाक्तो नहुन्याउ केई काम्मै छैन । मादेउसित खपट भइया पूज्जारा पूज्जारी भेट्ने औसर पर्नेलाई न भेटी चराउन डर लागोई न ता धोती छराउन । कोइकसैलाई गिरिट बराउने तल्तल लाउ भयादेखि आत्तिनु, तात्निु र मात्तिनु पर्दै पर्दैन । हजुर्रा दिनबार झनझन नाम्रा र जाक्ता आउन लाइया छन् गरै । “कत्नाम्रो मानशान पट्कायो, जागिरसागिर चट्कायो, पिल्सिङ सिल्सिङ पप्कायो । यत्ति मात्रै होला र ? स्वादौं बड्डा भट्ट कच्काउदै, डक्कार–सक्कार कार्दै टिल्सिङ जाक्दारी परइच्क्षा द्या पन्तै ठूल्लै गिर्रिटौं साट्टी पेप्पर पाइयान्च गरे ।” पच्छियौं भविष्य जान्ने प्रर्बुहरूले सनेस पठाछन् हेन्नोई ।
यस्तो नाम्रो खुप्पै कामलाक्ने शुव खप्पर गोप्या रुप्मा लुकाइकिन घरई जोइलाई मात्रै सुन्ना पनि क्या ला र ? कत्नाम्रो “आँप्नै बड्डिलाई मात्रै एक्लै सुटुक्क गोप्यामाँट पँइलो गिरिट्नु उत्तारीकिन ठूल्लै मान्नाउ जागिर्नु घुस्साउने भित्री योजना नबुन्याउ पनि काँ हो र ?” बित्ता पनि कान हुन्चन् भन्ने कुर्रो चाल नपाउदारी मुस्सैले टिप्पेल्चन हेन्नोई । “घ्वा फल्लाउने काल्लु कोस्सा कलाउने भाल्लु” भन्दाइनी फाइदा ल्ह्क्ने कति छन् कत्ति ? सप्पै आफ्ना कोई पनि बिराँन्ना नहुनेलाई पनि कर्रै पर्ने, आफ्ना कोई नहुँने र जम्मै बिराँना हुनेलार्ई पनि कर्रै पर्ने । यो चाल हो कि कुचाल फट्कार्नै नसक्किने भन्चौं । निमकान्मुन, रीतिरिवाजा, चालाचलन, वातव्यौरा, नइयाँ सिस्टिमौं मेल्लोमेस्सो नपाउदारी मान्स अल्मल्लै पर्रियान्च । बैराक मेटाउने बाट्टो यस्तो भाक्का “ठूल्लै दूध्या चल्लो, मइयाको हुम्त्ता देखेँ, रुम चिन्नै सकिन मँथ्लो हो कि तल्लो ?” आउच र मात्रै । नर्ती ज्यान सुक्कन ल्हैनी होइन्थ्यो भन्चौं । यस्ता गीत सङ्गीत उबाज्ने कलाकर्मी सात्याहरूलाई धन्यापात छ । बेलाबखत्नु पिर्रा डल्ला, बैराक, सोक र सुर्ता धप्पाई द्याछन् भन्र्चौं ।
“काँको कुरा काँ ? धन हुन्याउ मन हुन्न, मन हुन्याउ धन हुँन्न ।” यो खिस्सा साँच्चै जस्तो लाक्ने रइच भन्चौं । “आँप्पूmभन्दा अर्कोले इलिम ग¥याउ कत्ति नसँने र चिल्लिम प¥याउ जत्ति पनि सल्ने” बाइकले छा¥र्या आँशुले सानुभुत्ती देल्चन र मात्र्रै । नैतो भन्या हजुर्रा बैरिया घर्नु पैइरो गइन्थ्यो हेन्नोई । पुर्रापुर गिरिन्ट्या सात लिख्खाप¥र्यालाई विदेशीया धर्तिनु भर्ति गर्न भिक्सा लाउन पनि गिरिन्टि चाइने रह्ैच भन्चौं । जामाँज्जा अच्चमए नि ! “ज्यागर नात्ती धन्नैमाँत्ती” भन्दाइनी पासफिल्लौं मात्रै गिरिन्टी भइया क्या मान्दाउ ? चुनाउको टिकसदेखि गार्रियौ टिकस पाउनसम्म, दर्जापाउनेदेखि कर्जा कार्नसम्म, नाइकदेखि साइकसम्म, ठकदारदेखि हकदारसम्म, भारी बोक्नेदेखि पारी पुक्नेसम्म, छाँम्नेदेखि काँम्नेसम्माले गिरिन्टि नल्ह्क्ने काँई पनि नाँई हेन्नोई । ह्याँत्ती गर्ने कुरो, ज्यार्दारी पनि बिना गिरिन्टि आँपूmमु¥या कोई नफस्नोई । आफ्ना बिराँन्ना जम्मैले चालपाउन भन्ने मुख्खैले हो । ह्याँ, शिल्लाथापनदेखि बिल्लाथप्पनसम्म र लग्गनदेखि तमाँइको हग्गनसम्म गिरिन्टि बिना कोई नफस्सोई । सप्पैका मुख्नु दूधभात पस्सोई । यई गिरिन्टिौं काँम्ना छ । समाप्त
Previous articleसवैको असार
Next articleस्वास्थ्य चौकीमा लेखापरिक्षण सम्पन्न
aahasanchar - July 26, 2018
१० लाख बढी टेलिफोन शुल्क उठेन, कार्यालय पत्र काट्दै
aahasanchar - September 8, 2019